Phila, Thanda, Hleka | Martech Zone
NgoMgqibelo, Oktobha 20, 2007 NgoMgqibelo, Oktobha 20, 2007 Douglas Karr
Kudala ndenza ukucinga okuninzi mvanje kwaye ndixubusha umbongo nonyana wam ebomini, ukuba ngumzali, umsebenzi, ubudlelwane, njl njl.
Inqanaba 1: Umtshato
Malunga neminyaka esi-8 eyadlulayo yayikukuqhawula kwam umtshato. Kwafuneka ndifumanise ukuba andizokwazi ukuphatha ukuba ngutata 'wempelaveki' okanye ndingatshatanga. Ndikhethe le yokugqibela kuba andinokwazi ukuhlala ngaphandle kwabantwana bam.
Ngexesha loqhawulo-mtshato, kwafuneka ndifumanise ukuba ndiza kuba yindoda enjani. Ngaba ndiza kuba ngumyeni owayenomsindo owayerhuqa i-ex yakhe ngaphandle nangaphandle kwenkundla, imbi ngomlomo wakhe ex kubantwana bakhe, okanye ndiza kuthatha intsikelelo yokuba nabantwana bam kwaye ndithathe indlela ephezulu. Ndiyakholelwa ukuba ndithathe indlela ephezulu. Ndisathetha nomfazi wam wangaphambili rhoqo kwaye ndithandazela nosapho lwakhe ngamanye amaxesha ndiyazi ukuba bayasokola. Inyani yile, kuthatha amandla amancinci ngale ndlela kwaye abantwana bam bangcono kakhulu kuyo.
Inqanaba 2: Umsebenzi
Emsebenzini, kuye kwafuneka ndenze izigqibo ngokunjalo. Ndishiye ngaphezulu kwemisebenzi embalwa kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ndishiye enye kuba bendisazi ukuba andizukuba yile nto umphathi wam afuna ukuba yiyo. Ndishiye enye kutshanje kuba khange ndizalisekiswe ngokobuqu. Ndikwi Umsebenzi omnandi ngoku Oko kuyandicel 'umngeni yonke imihla ... kodwa ndiyinyani ukuba ngekhe ndibekhona ishumi leminyaka ukusukela ngoku, nokuba.
Ayisiyo yokuba ndinamathandabuzo, kukuba ndonwabe ngakumbi 'niche' yam kwezentengiso kunye neTekhnoloji. Ndiyakuthanda ukuhamba ngokukhawuleza emsebenzini. Xa izinto zicotha kwaye iinkampani zifuna ezo zakhono zingandiniki mdla, ndiyaqonda ukuba lixesha lokuba ndiqhubeke (ngaphakathi okanye ngaphandle). Ndiye ndafumanisa ukuba xa ndisebenza ngamandla am, ndingumntu owonwabe kakhulu kunakuba ndizikhathaza ngobuthathaka bam.
Inqanaba 3: Usapho
Ndisondela kwi-40 ngoku kwaye ndifikile kwinqanaba lobomi bam apho kufuneka ndenze izigqibo kunye nolwalamano lwam ngokunjalo. Kwixesha elidlulileyo, ndisebenzise amandla amaninzi ukuba nosapho oluziqhenyayo ngam. Ngeendlela ezininzi, uluvo lwabo lwalubaluleke ngaphezu kolwam. Ngexesha, ndiye ndaqonda ukuba bayilinganisela impumelelo eyahluke kakhulu kunangaphambili.
Impumelelo yam ibonwa lulonwabo lwabantwana bam, umgangatho kunye nobungakanani babahlobo obuqinileyo, inethiwekhi yabantu endisebenza nabo, intlonipho endiyifumanayo emsebenzini, kunye neemveliso kunye neenkonzo endizenzayo mihla le. Ungaqaphela ukuba isihloko, udumo okanye ithamsanqa zazingekho apho. Babengekho, kwaye ngekhe babe njalo.
Ngenxa yoko, isigqibo sam ibikukushiya abantu ngasemva abazama ukunditsalela ezantsi endaweni yokundiphakamisa. Ndiyabahlonela, ndiyabathanda kwaye ndiyabathandazela, kodwa andizukuchitha amandla ukuzama ukubenza bonwabe kwakhona. Ukuba andiphumeleli kuluvo lwabo, banokugcina uluvo lwabo. Ndingu linoxanduva lokonwaba kwam kwaye kufuneka bamkele uxanduva olungelwabo.
Njengotata, ndonwabile ukuba bangoobani abantwana bam okwangoku, kwaye ndiyabathanda ngokungagungqiyo. Iincoko zethu mihla le zimalunga noko baphumeleleyo ukukwenza, hayi kukusilela kwabo. Oko kwathethi, Ndilukhuni kubantwana bam ukuba abaphili ngokwamandla abo, nangona kunjalo.
Amabanga entombazana yam ehle kakhulu kwiveki ephelileyo. Ndicinga ukuba uninzi lwayo yayikukuba ubomi bakhe bezentlalo babubaluleke ngakumbi kunomsebenzi wakhe wesikolo. Wayebuhlungu xa efumana amabanga, nangona kunjalo. Uye wakhala imini yonke kuba ungumfundi we-A / B. Yayingeyiyo indlela endandiphoxeke ngayo eyayibonakala, yindlela awaphoxeka ngayo.
UKatie uyakuthanda ukukhokela eklasini kwaye uyakucaphukela ukuba sezantsi. Senze iinguqu-asizukundwendwela abahlobo kubusuku beveki kwaye akukho make-up. Imake-up yayiyeyona inzima… ndandicinga ukuba uzokutshisa imingxunya kum ngamehlo akhe. Kwiveki ephelileyo, nangona kunjalo, amanqaku akhe aqala ukubuya. Akasatshisi mingxunya kum, ade andihleke nangemini enye emotweni.
Sisenzo esinzima socingo oluphezulu, kodwa ndenza konke okusemandleni ukugxininisa kwizinto ezilungileyo, hayi ezimbi. Ndizama ukubakhokelela kwicala lolwandle oluhle, ndingasoloko ndibakhumbuza ngesiqhwithi emva kwabo.
Njengokuba abantwana bam bekhula bekhululekile kunye nabo, ndikhula ndibathanda ngakumbi ukuba ngoobani. Ziyandothusa yonke imihla. Ndinabantwana abangaqhelekanga… kodwa andinazo kwaphela iingcamango ezingezizo zokuba ngubani 'ndicinga ukuba kufanele ukuba babe' okanye 'indlela ekufuneka benze ngayo'. Yile yabo ukuba baqonde. Ukuba bonwabile neziqu zabo, ulwalathiso lwabo ebomini, kunye nam… ke ndonwabile ngabo. Eyona ndlela ndingabafundisa ngayo kukubabonisa indlela endenza ngayo. UBuddha wathi, "Lowo undibonayo uyayibona imfundiso yam." Andinakuvuma ngakumbi.
Inqanaba 4: Uvuyo
Ndikhumbula a amagqabantshintshi ithutyana ubuyile 'kumhlobo olungileyo', William ngubani obuzile, "Kutheni amaKristu kusoloko kufuneka azichaze?". Khange ndiwuphendule umbuzo kuba kuye kwafuneka ndicinge kakhulu ngawo. Wayenyanisile. AmaKrestu amaninzi azisa ukuba ngoobani 'abangcwele kunawe'. UWilliam unelungelo lokucela umngeni kubantu kule nto. Ukuba ubeka isiseko, kulungele ukuphendula ukuba kutheni ulapho!
Ndifuna abantu bazi ukuba ndingumKristu- hayi kuba ndinguye kodwa ngenxa yokuba ndinethemba lokuba ngolunye usuku. Ndifuna uncedo ngobomi bam. Ndifuna ukuba ngumntu onobubele. Ndifuna abahlobo bam bandiqonde njengomntu obakhathaleleyo, ndibabeke ngoncumo ebusweni babo, okanye ndibakhuthaze ukuba benze into eyahlukileyo ngobomi babo. Njengokuba ndihleli emsebenzini ndisebenza nomthengisi onenkani okanye ibug endisombulula ingxaki kwizangqa, kulula kum ukuba ndilibale umfanekiso omkhulu ndithethe amagama ambalwa. Kulula kum ukuba nomsindo kubantu benkampani abandinika ubunzima.
Uluvo lwam (olunomda) lweemfundiso endikholelwa kuzo zindixelela ukuba abo bantu bakwezinye inkampani mhlawumbi basebenza nzima, banemiceli mngeni abazama ukuyoyisa, kwaye bafanelwe ngumonde kunye nentlonipho yam. Ukuba ndiyakuxelela ukuba ndingumKristu, indivulela ukugxekwa xa ndingumhanahanisi. Ndihlala ndingumhanahanisi (amaxesha ngamaxesha) zive ukhululekile ukundazisa ukuba andinguye umKristu olungileyo, nokuba awunazo iinkolelo ezifana nezam.
Ukuba ndingafumana inqanaba lesi-4, ndiza kulishiya eli lizwe lingumntu owonwabileyo. Ndiyazi ukuba ndizakufumana ulonwabo lwenene… Ndikhe ndalubona olo vuyo kwabanye abantu kwaye nam ndiyalufuna. Ukholo lwam lundixelela ukuba le yinto nguThixo ufuna ukuba ndibenayo. Ndiyazi ukuba yinto ekhoyo yokuthatha, kodwa kunzima ukuyilahla imikhwa emibi kunye nokutshintsha iintliziyo zethu. Ndiza kuqhubeka nokusebenza kuyo, nangona kunjalo.
Ndiyathemba ukuba le ibingeyonto ikhawulezayo kuwe. Ndidinga ukukhupha kancinci malunga nemicimbi yosapho kunye nokubhala ngokucacileyo kungandinceda kakhulu. Mhlawumbi iyakukunceda nawe!
tags: Ukufaka uphawuimibonisoukupapashwai slidediUkukhula kwesilayidiimigaqo-nkqubo ye-sminkuku emnyamawp_footerwp_intloko
Oktobha 20, 2007 ngo-3: 45 PM
Isithuba esikhulu! Kwaye ndiyakuthanda ukwazi ukuba ayindim ndedwa umzali owohlwaya ngokususa izinto zokuthambisa. Intombi yam icinga ukuba i-eyeliner ngumhlobo wayo osenyongweni. Iyamangalisa indlela “akhawuleza ngayo ukuyifumana” xa engavunyelwanga ukuba abe nayo. 🙂
Oktobha 20, 2007 ngo-4: 04 PM
I-Eyeliner lutshaba lukatata-oneminyaka eli-13 ubudala. 🙂
Ndicinga ukuba i-make-up ingumtyibilizi. Andizange ndibe ngumlandeli we-make-up eninzi kwaye ithiyori yam yeyokuba abafazi basebenzise ngakumbi nangakumbi ngenxa yokuba baye badinwe ukuba bahle kangakanani. Ke... ukuba uneminyaka eyi-13, uya kujongeka njengePicasso xa una 30.
Ngekhefu lokuzenzela, ndiyathemba ukuba uKatie unokubona ukuba umhle kangakanani kwaye asebenzise ngaphantsi kamva.
Oktobha 20, 2007 ngo-10: 54 PM
Ndiyavuma. Nangona ubuchule bokujongisa amehlo bentombi yam bufike buluncedo kakhulu ngobu busuku njengoko bendilungiselela uMnyhadala weFilimu we-Heartland Crystal Heart Awards. Uye wabhengeza ukuba "ndiyenza kakubi" kwaye waqhubeka nokulungisa amehlo am. Ewe, andinguye umlandeli omkhulu we-makeup, ubukhulu becala b/c andithandi ukuchitha ixesha kuyo. Abasetyhini abaninzi abayifaka ngetrowel kufuneka bayeke i-b/c bahle kakhulu ngaphantsi. Ungutata olungileyo ngokuzama ukufundisa intombi yakho into entle ngokwenene.
Okt 21, 2007 ngexesha 1:53 AM
Wow, yintoni isithuba Doug! Ndisithanda kakhulu isimo sakho sengqondo.
Uyazi, kukho ukudibana okukhulu phakathi kobuKristu kunye nobuSilamsi xa kuziwa kusapho kunye nemilinganiselo yentlalo. Uninzi lwezinto othe ukholelwa kuzo ngumzekelo weemfundiso ezininzi zamaSilamsi. Kuyahlekisa ukuba ngamanye amaxesha abangengoMulsim njengawe benze umsebenzi ongcono wokubonisa iinqobo zamaSilamsi kunamanye amaSilamsi ngokwabo.
Ke ngoko, ndiyakubulisa! Qhubeka unesimo sengqondo esihle. Uyiblogi enkulu, kwaye uqinisekile ukuba isihogo sivakala njengesihogo sikatata.
Okt 21, 2007 ngexesha 8:18 AM
Kuyahlekisa ukuthetha oko. Ndiyifundile iKurani kwaye ndinabahlobo abangamaSilamsi. Ngalo lonke ixesha sidibana sifumana okuninzi okufanayo phakathi kweenkolo zethu. Enkosi nangezincomo zakho – andicingi ukuba ndingumzali olungileyo njengokuba bendinokuba nguye, kodwa ndiyazama!
Okt 21, 2007 ngexesha 5:25 AM
Uxolo ukuyithetha, kodwa esi sithuba sinengxoxo malunga nokuba ndingabhali okanye hayi - ngenxa yezizathu ezimbalwa:
1. Le yibhlog malunga nokuthengisa (okanye oko kukubona kwam). Ngelixa kulungile ukongeza ubuntu kwaye kulungile ukukhankanya iinkolelo zakho, umyalezo omde malunga nenkolo undicimile.
Ungandiva kakubi; inkolo ilungile kwaye ndiyazihlonipha iinkolelo zakho. Kodwa inkolo yobuqu, kwaye andicingi ukuba inendawo kwibhlog yeshishini. Ukuba ndandifuna ukufunda ngonqulo, ndandidla ngokubhalisela iiblogi ezineembono zonqulo.
2. Ukubhala ngentombazana ekwishumi elivisayo ekhala imini yonke ngenxa yokungaphumeleli kakuhle kwesikolo kundenza ndidinwe sisisu. Umntwana akaphoxekanga, usenokuba uyoyika indlela osabela ngayo!
3. Ukubhala ngokohlwaya umntwana ngenxa yamabanga amabi emva kokuba elila imini yonke (nto leyo engeyiyo indlela eqhelekileyo yokusabela kwintombazana ekwishumi elivisayo) kundenza ndizive ndigula nangakumbi. Wohlwaya umntu xa enze into engalunganga kwaye ungazisoli, ngokuqinisekileyo. Kodwa xa umntu enze ukhetho olubi, waqonda, wafunda kuyo kwaye ulungele ukwenza ngcono kwixesha elizayo, yiyeke loo nto. Vumela intombi yakhe ukuzithemba. Myeke enze ngcono kuba efuna – hayi kuba esoyika ukohlwaywa.
Ndiyahlonipha ukuba ungavumelana nam okanye ungavumelani nam. Ndicinge nje ukuba ungathanda ukwazi ukuba kutheni le post yebhlog iphose uphawu ngokupheleleyo nam.
Okt 21, 2007 ngexesha 8:30 AM
Enkosi ngokuthatha ixesha lokubhala. Ukuba uziva unyanzelekile ukuba uzikhuphe kubhaliso, ndingazisola ukukubona uhamba kodwa andinangxaki noko. Le ayisiyoblogi yenkampani, yeyomntu. Ke ngoko, ndicebisa abafundi bam kubugcisa bam kodwa ndikwabonakala elubala ekudluliseleni iinkolelo zam nabafundi bam.
Ngokuhamba kwexesha, ndiye ndangabahlobo abakhulu nabafundi bebhlog yam - ubukhulu becala ngokuyinxenye kwinto yokuba ndabelana ngomsebenzi wam nobomi bam nabafundi bam. Ndiyavuma; nangona kunjalo, gcina izithuba zam zobuqu kudidi lwam "lwasekhaya" ukuze uphephe ukuzifunda ukuba uyathanda.
Ndiyaluhlonipha uluvo lwakho kwinto eyenzekileyo nentombi yam. Intombi yam ayitshixekanga naphi na :), ineselfowuni, isidlali-mp3, ikhompyutha, umabona kude, njl.njl. ngoko ke 'ayiyohlwaywa' nangona ukususa i-makeup yayiyiloo nto yayimsokolisa. Ndiyakuqinisekisa ukuba akandoyiki. Usenokucaphuka xa ecinga ukuba undiphoxile, kodwa andizange ndimnike uKatie isizathu ‘sokoyika’.
Andiqinisekanga kangako, xa ndineminyaka eli-13 ubudala, bekufanele ukuba ndimvumele ukuba aqabe izinto zokuthambisa kodwa yintombazana elungileyo enamanqaku amahle kunye nesimo sengqondo esihle – ke ndiyazama ukumnika inkululeko ayifunayo. Xa endibonisa ukuba uyakwazi ukumelana nayo, andizange ndimbeke imida kuye. Ukuba ungumzali, uyayazi indlela ezinzima ngayo ezi meko.
Ndiyathemba ukuba uya kuhlala undazi! Kukho ulwazi olulungileyo kule bhlog kwaye ndiyakuthanda ukwabelana ngento endiyifundayo kushishino.
Okt 21, 2007 ngexesha 9:28 AM
Kulungile, Doug. Ndineblogi yeshishini kunye necandelo elibizwa ngokuba "IiRamblings zoBuntu" kuhlobo olufanayo lwezinto. Ubume bendawo kunye nokugubungela ukuza kuthi ga ngoku kuye kwandinika umbono wokuba yibhlog yeshishini.
Ndizifumana ndikwimeko engaqhelekanga kakhulu kwi-Intanethi. NdingowaseKhanada, kwaye inkcubeko yethu ithande ukuba cwaka kakhulu ngonqulo kunabamelwane bethu baseMelika, uninzi lwabo luthanda ukuba neembono ezibaxiweyo (ngokoluvo lwam, kwaye anditsho ukuba ungoobaxiweyo). Ndiyazihlonipha iinkolelo zabantu kwaye ndinezam ngokunjalo, andikuthandi nje ukunyanzelwa.
Ngelishwa, obo bugqwirha bundishiyile ndilumkile kakhulu ukubethelwa yibhayibhile, kwaye iradar yam yokubetha okungenayo ibonakala ibekwe kubuntununtunu obuphezulu. Ke ukuba andizukubethwa apha, ndiza kuhlala. Isivumelwano esilungileyo?
Ngokuphathelele amantombazana… Kuhle ukuva ukuba uyaqonda ukuba ulutsha luyidinga loo nkululeko, kwaye ndiyabulela ngokuyilungisa loo nto. Ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba i-leash iqina, ngakumbi ingxaki abazali bazibekela yona. Kwakhona “andibafumani” abazali abaphatha kakubi abantwana babo. Asiyompendulo nje.
Kwaye…Ndine-14 leminyaka ubudala kunye nosana ngokwam, ngoko ke ndiyakwazi ukuziqhelanisa nemingeni yobuzali kunye namandla okwenza izimonyo.
Enkosi kwakhona ngempendulo yakho. Ndinento encinci (ilungile kakhulu) yokuphendula ngamadolo kwisithuba, ngoko ukwabelana kancinci malunga nam ukuze ungacingi ukuba ndiyimpundu epheleleyo, funda kwisithuba sam malunga neempendulo zedolo.
Okt 21, 2007 ngexesha 10:24 AM
Thina maMelika sithanda ukutyhala yonke into ebusweni bakhe wonke umntu - imfazwe, ubutyebi, ubuchwepheshe, umculo, inkolo… Xa omnye wethu enyanisekile, kunzima ukusithatha ngokunzulu.
Ndahlala eVancouver iminyaka eyi-6, ndiphumelele kwisikolo samabanga aphakamileyo apho. Enyanisweni, icala likaMama kusapho lonke lisuka eKhanada. Utatomkhulu wam ligosa elidla umhlala-phantsi kumkhosi waseKhanada. Ndingumlandeli omkhulu waseKhanada kwaye ndisakwazi ukucula umhobe wesizwe (ngesiNgesi, ndilibele inguqulelo yesiFrentshi). Umama wam nguQuebecois, wazalelwa wakhulela eMontreal.
Ndiyaqhula kunye nabahlobo bam besikolo samabanga aphakamileyo ukuba iMelika ayinakubuza i-toque engcono kuneCanada!
Enkosi ngempendulo yakho ecingisisiweyo… Khange ndiyithathe ngolo hlobo kwaphela.
Okt 21, 2007 ngexesha 10:59 AM
Ijongeka njengembali yakho ephambili. Kodwa iposi yakho ine-gushy ngokwenene. Ndiyathemba ukuba uya kufumana ulonwabo ngakumbi yonke imihla!
Oktobha 21, 2007 ngo-9: 20 PM
Oktobha 21, 2007 ngo-4: 55 PM
Ndizakuthumelela iitoques zeKrisimesi 🙂
Oktobha 21, 2007 ngo-9: 21 PM
Imnandi! Kwaye mhlawumbi ezinye iiLabatts!